China Agba igwe anaghị agba nchara Panel Filter isi ihe na-emepụta ihe & ndị na-ebubata ya - Huanyu Sanitary Ware
Home > Ngwaahịa > Isi ịsa ahụ > Isi ụlọ ịsa ahụ iyo > Isi igwe anaghị agba nchara nchara ncha isi
China Yi Igwe anaghị agba nchara Panel Filter isi ụlọ ọrụ
Anyị na-enye ihe ọ na-eme ka ọ na-enweghị igwe anaghị agba nchara na-eme ka mmiri na-egbu egbu mara mma nke ọma na 2 afọ akwụkwọ ikike. Nchekwa na ntụkwasị obi, nkwa ihe onwunwe. Anyị etinyela aka na ngwa ịsa ahụ maka ihe karịrị afọ 10, ndị ahịa anyị nọkwa na mpaghara dị iche iche nke ụwa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye mmekọ gị ogologo oge na China.
yi igwe anaghị agba nchara panel filter ịsa isi
Ntugharị, acha anụnụ anụnụ, odo
agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agbachcha agbachchchchchchchchchchchchchchchchch d niile d ekse , n'agbanyeghị n'ụlọ , hotels , ma ọ bụ n'ebe ndị ọzọ mkpa ịsa ahụ akụrụngwa .
Plastic ABS ọhụrụ, nke na-adịghị egbu egbu, ezigbo mgbochi iyi, oke okpomọkụ na-eguzogide, ezigbo mgbawa
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Agba igwe anaghị agba nchara nchara nchara isi, ndị na-emepụta ihe, ndị na-ere ahịa, China, ọnụ ahịa, ụlọ ọrụ, ndị na-ebubata ya.